Udidi lokuThengisa amaNqaku | Martech Zone |
Izixhobo kunye nezona ndlela zilungileyo zokuthengisa kunye nokukhuthaza iminyhadala yedijithali kunye nokuhlala, iinkomfa kunye neewebhu.
I-Vendasta: Linganisa i-Arhente yakho yeNtengiso yeDijithali Ngale Platform yokuGqibela-ukuya-ekuMphelweni kweLeyibhile emhlophe
NgoLwesine, Aprili 14, 2022 NgoLwesine, Aprili 14, 2022 Douglas Karr
Nokuba uyi-arhente yokuqalisa okanye i-arhente yedijithali ekhulileyo, ukukala i-arhente yakho kunokuba ngumngeni omkhulu. Kukho iindlela ezimbalwa kuphela zokulinganisa i-arhente yedijithali: Fumana abaThengi abatsha - Kuya kufuneka utyale imali kwiintengiso kunye nokuthengisa ukufikelela kumathemba amatsha, kunye nokuqesha italente efunekayo ukuzalisekisa ezo ndibano. Nikeza ngeeMveliso eziNtsha kunye neeNkonzo - Kufuneka ukwandise iminikelo yakho ukutsala abathengi abatsha okanye ukwanda
NgoLwesibini, Matshi 22, 2022 NgoLwesithathu, Aprili 27, 2022 Douglas Karr
Ukuba usebenza kwiqonga lolawulo lomxholo odumileyo, uya kuhlala ufumana ukhetho olukhulu lwezixhobo kunye namawijethi anokongezwa ngokulula ukuphucula indawo yakho. Ayizizo zonke iqonga ezinokhetho, nangona kunjalo, ihlala ifuna uphuhliso lomntu wesithathu ukudibanisa iimpawu okanye amaqonga onqwenela ukuwaphumeza. Umzekelo omnye, mva nje, ibikukuba besifuna ukudibanisa uPhononongo lukaGoogle lwamva nje kwisiza somthengi ngaphandle kokuphuhlisa isisombululo.
Omnye wabaxumi bethu unoluhlu lwabathengi abangaphezu kwe-100,000 abathumele kubo kodwa abanayo idilesi ye-imeyile yokunxibelelana nabo. Sikwazile ukwenza isihlomelo se-imeyile esihambelana ngempumelelo (ngegama kunye nedilesi yeposi) kwaye siqale uhambo olwamkelekileyo olube yimpumelelo. Abanye abathengi abangama-60,000 esibathumelela ikhadi leposi kunye nolwazi lwabo olutsha lokusungulwa kwemveliso. Ukuqhuba ukusebenza kwephulo, sibandakanya